Uma une ndawo nezasemalokishini wena ngentshiseko iqale utshani kanye engadini umsebenzi entwasahlobo, unentshisekelo kokuthola sokuvuna imibhede yabo. Ngo kuwebhu kukhona izihloko eziningi ekubhekaneni imithetho ukutshalwa isiko, futhi yonke indawo okulotshwe, udinga ukukhetha indawo nezinga ezidingekayo asidi ulungise uma kudingeka. Kodwa wazi kanjani ukuthi kungakanani ukudukiswa phansi? Lokhu kuzosiza amamitha inhlabathi asidi. Ukuze lokho abayikho kudingekile?
Kungani sidinga imitha?
Njalo cottager isiqiniseko sokuthi kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi yiziphi nemingcele eyinhloko umhlaba, futhi kuba PH, umswakama, izinga lokushisa kanye ukukhanyisa. Uma kukhona isifiso ukuthola isivuno esihle, isiko kufanele itshalwe futhi kwanda phansi senzelwe wakhe. Ake sithi, ngoba iklabishi uyakuwufeza ezweni lakho, kodwa izaqathe ku yakhe ungethuki. Ukuze wazi kahle lapho futhi kanjani unamathisele isiko ezivuma umquba nezinye izakhamzimba, kufanele ukuthenga imitha inhlabathi asidi. Ziyakwazi woketshezi, kukhona plastic, okuyinto sikuvumela ukusetshenziswa. idivayisi okunjalo akudingi ukusetshenziswa idiploma of Isikhungo wezolimo, kuba sasivumela kulula ukuyisebenzisa.
Namuhla ithengiswe ezihlukahlukene ezikhethekile sokulinganisa zomculo, afaneleka okwesikhathi emkhakheni wezimboni enkulukazi, futhi endaweni encane eduze kwendlu zwe. Mayelana onobuhle ethandwa kakhulu, imithetho yokusetshenziswa uzobe okuxoxwe ngazo kulesi sihloko. Izinguquko Ezenzeka temusho ufunde ukuthi obaba ababhekana kahle ku izingadi zabo futhi ahlakulela isitshalo esezingeni elifanele. Babefanele namaqhinga abo, ngakho ngokungabi bikho yokulinganisa asidi inhlabathi kanye nemingcele yayo, ungakwazi kalula bazuze ulwazi kanye nogogo nomkhulu.
Sanquma ukuhlinzeka ezinye ethandwa kakhulu izindlela yokulinganisa umhlaba asidi ngokurhaba izindlela. Babazi kahle, wenza kanjalo uyokuqonda ukuthi ukusetshenziswa ithuluzi professional okuyinto kuwusizo kakhudlwana. Sithemba ukuthi imikhandlu abantu kuyoba wusizo kuwe, uma imitha akuyona ngakwesokunene noma ibhethri ihlala. Bonke labo abaye basebenzisa ezikhethekile yokulinganisa inhlabathi asidi, nikwazi olungalungile kukhona nokwenza kwayo, uma sekuyisikhathi sokuba ufake linye ibhethri.
Ngakho, yini eyosisiza?
Uviniga soda endlini umndeni ngamunye, futhi kuleli zwe, mikhiqizo ngokuvamile. Ngakho, ukuze ulinganise asidi, thatha amasampula amabili emhlabeni embotsheni 25 cm ukujula, wafaka ezitsheni ezahlukene. Omunye isampula uthele uviniga. Uma uya encimfelwayo futhi avele Bubbles, lokhu kubonisa ukusabela ane-alikhali. Manje, ukusakaza isipuni baking soda in ingilazi yamanzi futhi uthele lokhu isisombululo isampula yesibili. Ukuba khona Bubbles futhi igwebu layo kubonisa acidification. Uma bobabili amasampula ziziphatha kahle futhi yokusabela kuya ocwebezelayo wayengekho, une emhlabathini omuhle, nge izinga evamile alkalis futhi acid.
Qoba iklabishi elibomvu futhi ubilise ke emanzini uze uthole umhluzi onsomi. It beka enhlabathini ethathwe endaweni kahle (25 amasentimitha ukujula) ugovuze. Uma umhluzi ucaciswa ukuba pink - anda asidi, uma umbala ishintshelwa oluhlaza noma blue - ane-alikhali anda.
amashidi amaningi kanye currants cherry endaweni esincane amanzi abilayo imizuzu engu-15. Ngemva kwalokho, ufafaze emhlabathini lapho. Isixazululo aluhlaza - inhlabathi hlangothi, blue - acidification, obomvu - ane-alikhali.
Zonke lezi izitatimende ukuthi ayiqiniso, kodwa awukwazi ukufunda indlela acidified inhlabathi, noma njengoba lidlula izinga alikhali. Kungenxa ukufundwa olunembile ezivezwa yokulinganisa asidi kwenhlabathi. Ngaphezu kwalokho, sizobonisa lokushisa, ukukhanya kanye nezinye izilungiselelo.
Indlela yokusebenzisa idivayisi?
Njengoba kushiwo ngaphambili, akudingi oluqondile ukusebenza imitha. Ngayinye kudivayisi, kwi saziso isisekelo sisetshenziswa ngumkhiqizi ngemiyalo enemininingwane.
Kodwa sanquma zisikisele izindlela lapho ukufundwa kuyoba esinembile:
Uma wenze Umanyolo ke ukwakheka izilinganiso ngaphambili kuka ezintathu izinsuku;
Ungakhohlwa amanzi ezweni, okuyinto intando ihlolwe;
emhlabeni Uphenyo inhlabathi kumele kube kahle ohlangene;
Kumelwe kwenziwe izilinganiso ezintathu, bese ubala isilinganiso;
induku yokulinganisa kumelwe igcinwe nangemuva kokuhlolwa ngalinye seziphelile nge napkin.
Lapho uthenga ukubuza umdayisi uma asidi we imitha inhlabathi ulinganiswe. Uma kungenjalo, khona-ke kumelwe bathenge isixazululo sesikhana futhi ulinganise ngokwakho. Ngaphezu kwalokho, siphakamisa yazi nge imodeli ethandwa kakhulu futhi engabizi.
Imitha inhlabathi asidi "Green Belt"
Le divayisi okungukuthi efana balimi for the lula ukusetshenziswa, enembile izilinganiso etholakalayo price tag. Imitha inhlabathi asidi 3 1 Ngeke ufunde nje kuphela PH, kodwa futhi umswakama, ukukhanya senhlabathi yakho. The main inzuzo zedivayisi - akukho amabhethri, okuvumela ukuba uthole enembile nakakhulu izilungiselelo ziphinde zinikeze izitshalo endaweni kakhulu ukhululekile izimo sokukhula. Lokhu kuzothinta yakho isivuno kuphela omuhle ngendlela.
Ukusebenzisa imitha umswakama, inhlabathi asidi nokuthi kuwe kutholakele ukukhanyiselwa yayo akudingi amakhono, ngisho ingane ngeke naso ngokuphumelelayo.
Uma uthenge lo mkhiqizo futhi baye baphelelwa imiyalelo, thina kuyokusiza ukukhumbula imithetho yokusetshenziswa. Kala okukhanyisa:
Vula switch ku Imodi Khanyisa.
Beka uphenyo inhlabathi emhlabeni izitshalo.
Solar ibhethri ezakhelwe iyunithi kuqondiswe umthombo wokukhanya etholakalayo.
Musa ukuvimba ukukhanya.
Imitha asidi (PH) kwenhlabathi:
Vula switch ku PH, ubhapathizelani probe enhlabathini amasampula, okuyindawo pre-unamathisele senziwa. Uphenyo kumele iphucuziwe ne ucezu lokukhuhla nendwangu wagcoba.
Imitha ibekwe zibheka base izindlu. Inhlabathi kumele kancane oswakanyiswe.
A ngomzuzu olandelayo, funda izinkomba esikrinini.
Shintshela Moist, ufaka uphenyo phansi.
Izinkomba: obomvu - ezomile noma inhlabathi kancane olumanzi, ofanele kuphela ezikhulayo Cacti nameva; Blue - waterlogging, ungalilahli izitshalo amanzi kuze kube inhlabathi bome out kancane; oluhlaza - ephelele amafutha.
Ukuze usebenzise zonke amathuluzi for ukulinganisa izindleko ngendlela efanayo. Siphakamisa cabanga kweminye imihlobo.
Lokhu kubuye i electronic wokulinganisa asidi kwenhlabathi uhlobo 3 1. Nge-KC-300, Futhi ungenza izilinganiso umswakama futhi ukukhanya. Yiziphi kunezinzuzo zako kanye nebubi? Kulesi kudivayisi ibanga sasivumela olubanzi senzo. Kubalulekile futhi ukuthi unesikhathi ukuphila side, njengoba kwaphawula u-le balimi.
Phakathi amaphutha kule imodeli, kwatholakala ukuthi ibhethri Asihlali isikhathi eside, ngisho eqolo futhi izinga. Uma amandla useye wahlala phansi, iphutha kule izilinganiso kuyoba enkulukazi.
Le yunithi okungukuthi zingenza ngesilinganiso ukukhanya nomswakama. Imodeli kungumzimba ngempela engasindi eyenziwe ngepulasitiki, kodwa enamandla kakhulu, okuyinto ebaluleke lapho esebenza endaweni engadini. A inzuzo elikhulu imitha ukuthi akudingeki ukuba esikhundleni amabhethri. Phakathi amaphutha waphawula ububanzi elincane senzo. -panel ayo angu-solar ungavumeli okukhanyisa izilinganiso in zokugcina noma icandelo.
Lokhu wokulinganisa inhlabathi asidi electronic akuyona ithandwe. Nayo ungakwazi ukuthola umswakama, kodwa ukukhanya kuyodingeka ukukhohlwa. Kusukela izinzuzo isehlane ukuqina, asikho isidingo ukushintsha ibhethri, amandla kanye uphenyo eside (30 amasentimitha).
I yokuntula kwalesi imodeli kwaba amanani aphezulu kanye uhla encane kakhulu yomsebenzi.
Imitha inhlabathi asidi: Izibuyekezo
Abalimi abaningi nabalimi abathenge idivayisi ukusetshenziswa siqu, ushiye amazwana kuwebhu. Babhala ukuthi yokufuna akazisolanga, ngoba ngenxa yakhe ihlulekile ukwandisa izivuno. Izitshalo manje bazizwa bekhululeke kakhudlwana futhi kungadingeki ukuba "ibe" ngalokho ukuze kwenziwe umquba enhlabathini. imibono engakhi ayitholakali, zonke amaholide ukuncoma nakanjani ukusetshenziswa kwamadivaysi anjalo, babhala ukuthi umsebenzi kusayithi manje ethakazelisa kakhulu, ngoba wazi ukuthi umsebenzi ngeke ube yize.
Indlela ukutshala dahlia ekhaya
Plum: zokutshala nokunakekela
Couch - amaqembu alwayo?
Blow-ezomile izinwele. izincomo
Amazinyo Zanamuhla: izinyo elilodwa mhlophe
Uhlelo Furmark: kanjani ukuyisebenzisa? Buyekeza, Ukucaciswa, imiyalelo, ukubuyekezwa
Bat: vampire noma cha?
Ubugebengu ahlekisayo "Genius": nabalingisi izindima, abadali, ngesakhiwo